बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ ! | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 17, 2021 NepstokLeaveaComment on बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ !
छिट्टै उर्जा प्रदान गर्ने फलको रुपमा चिनिने केराले तपाईलाई स्वस्थ्य मात्रै राख्दैन, केही जटिल प्रकारका रोगबाट पनि बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केराले तपाईको शरीरलाई धेरै प्रकारका रोगबाट बचाउँछ ।
पूर्ण रुपमा पाकेको केराको बोक्रामा केही काला दाग देखिन्छन् । – बोक्रामा कालो दाग हुने गरेको पाकेको केरा खाँदा तपाई क्यान्सर रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ । जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यो तथ्य पत्ता लागेको हो ।
पूर्ण रुपमा पाकेको केरा, जसको बोक्रमा कालो दाग हुन्छ, टीएनएफ नाक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । उक्त तत्वलाई ट्यूमर नेक्रोसिस फेक्टर पनि भनिन्छ । यो तत्वले शरीमा क्यान्सर उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरियासँग लड्छ ।
यस्ता तरकारीले दिमागमा किरा उब्जाउँछ ,ख्याल नगरे ज्यानपनि लिनसक्छ ज्या*न
महिना दिनमै पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन खानुहोस् मुला !
यूरिक एसिड बढ्दा नखानुहोस् यस्ता खानेकुरा